XOG:mucaraadadii ugu aadkeed oo ay wajahayaan wasiiradad cusub#aqri yaa ka soo horjeeda | Xaqiiqonews
XOG:mucaraadadii ugu aadkeed oo ay wajahayaan wasiiradad cusub#aqri yaa ka soo horjeeda
Warar hoose oo aan ka heleyno xubno ka tirsan Xildhibaanada Baarlamaanka sheegaya in uu jiro Kulamo xasaasi ah oo ay wada yeelanayaan Xubno ka tirsan Baarlamanka kuwaas oo doonaya in afka ciidda loo daro Xukuumada uu soo dhisay W/wasaare Xasan Cali Kheyre.
Sababta ay Xildhibaanada qaar kood uga soo horjeesteen Xukuumada Shalaya Lamagacaabay waxaa ay tahay in ay u arkaan mid aysan u sineyn beelaha Soomaaliyeed oo loobaiyey beelo qaar.
Dooda ugu xiisaha badan ayaa ah sinaanta jagooyinka dawladda oo aan loo helin sifo sax ah, tas oo keentay in dood kulul ay noqoto oo ay jiraan wali mudanayaal doonaya in dib loogu laabto liiska magacaabida golaha Xukuumada Soomaaliya.
Xildhbaanada Beelaha Digil, Mirifle, Daaroodka qaar kamid ah iyo Xildhibaanada Direed ayaa ka soo horjeeda dhismaha hanaanka golahan cuusb, oo ay sheegeen in beelaha qaarkood loo badiyey.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Max’ed Sheekh Cismaan Jawaari ayeey xogtu sheegeysaa in uu qeyb ka yahay abaabulkan, maadaama beeshiisu ay heshay wasiiro ka yar kana tayo yar xubnaha beesha Hawiye ay ka heshay saamiga golaha Xukuumada Faderaalka.